Repoblika Demôkratikan'i Kôngô : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Repoblika Demôkratikan'i Kôngô : Fahasamihafan'ny versiona roa
Repoblika Demôkratikan'i Kôngô (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 14 Novambra 2020 à 05:22
457 octets ajoutés , il y a 2 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 14 Novambra 2020 à 04:45 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 14 Novambra 2020 à 05:22 (hanova) (esory)
Ny '''Repoblika Demokratikan'i Kôngô''' dia firenena ao amin'ny faritr'i [[Afrika Afovoany|Afrika afovoany]]. Izy no firenena ao [[Afrika]] ngeza indrindra eo aorian' i [[Sodàna]] sy i [[Aljeria]] ; izy koa no firenena ngeza indrindra sy be mponina indrindra ao amin' ny faritr' i [[Afrika Afovoany|Afrika afovoany]]. Ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô no firenena be olona indrindra ao amin' ny fikambanan' ny firenena miteny frantsay eo alohan' i [[Frantsa]]. Iantsoana azy koa ny hoe '''''Kôngô-Kinshasa''''' mba tsy hifangaroany amin' i [[Kôngô-Brazzaville]]. I Kinshasa no renivohiny, avy eo no niavian' ilay anarana hoe Kôngô-Kinshasa. I [[Zaira]] koa no anaran' io firenena io tamin' ny [] hatramin' i [], teo izy niova ''Repoblika Demôkratikan' i Kôngô''.
==== Mponina voalohany ====
Efa nisy olona ity faritra ity tamin' ny 200 000 taona tal. J.K. Ny lemaka midadasika kôngôley tamin’ izany fotoana izany dia rakotry ny ala tsy nisy nanimba. Tany amin’ ny taonarivo faharoa dia nisy mpamboly [[banto]], avy any amin' ny faritra eo anelanelan' ny tapany atsinanan' i [[Nizeria]] sy ny Grassfields any [[Kamerona]], hatramin'ny 2600 tal. J.K., niditra tao amin’ io faritra io ka niorim-ponenana amin’ ny morontsiraka sy teny amin’ ny lembalemba atsinanana sy atsimo, ka teny izy ireo no nanangana fiarahamonina tarihin’ ny lehibem-poko.
Nisy ny fanjakam-panjaka niorina koa teo anelanelan'ireo taonjato voalohany taor. J.K. sy ny taonjato faha-15, ka ny lehibe indrindra amin'ireo dia ny fanjakan' i Loba (''Luba'') sy ny fanjakan' i Londa (''Lunda'') ary ny fanjakan' i Kôngô (''Kongo''). Tamin’ ny taona 1482 dia nifandray voalohany tamin’ ny fanjaka-mpanjaka banto tao Kôngô (''Kongo'') ny Pôrtogey.
Tamin’ ny volana Janoary 2001 dia nisy namono tao Kinshasa tamin’ ny fomba sy antony tsy tena mazava i [[Laurent-Désiré Kabila]]. Ny ampitson’ ny fandevenana azy dia ny zanany lahy [[Joseph Kabila]] no notendren’ ny Antenimiera vonjimaika ho filohan’ ny Repoblika hisolo azy. Tany Tanzania sy tany Oganda no nahalehibe azy alohan’ ny hiverenany tao an-tanindrazany tamin’ ny taona 1996. Nanaraka fiofanana miaramila tany [[Sina]] izy. Nanao fitsidihana ara-diplômasia tany amin’ ny firenena valo ambin’ ny folo i Joseph Kabila.
Nanangana governemanta vaovao tamin’ ny volana Avrily 2001 i Joseph Kabila ary tsy nampidiriny amin’ izany ireo olona akaiky ny rainy. Nanambara ny fankasitrahany ny hisian’ ny fifidianana amin’ ny fotoana tsy ela araka izay azo atao izy. Nitohy ny fifampiresahana teo amin’ ny samy Kôngôley taorian’ ny tsy fahombiazan’ ireo fihaonana tany [[Addis Ababa|Addis-Abeba]] tamin’ ny volana ÔktôbraOktobra 2001.
==== Fifanarahana hitondrana ny firenena ====
Taorian’ ny fialan’ ny tafika rehetra avy any ivelany ([[Roanda]], [[Oganda]], [[Angôla]], [[Namibia]] ary [[Zimbaboe]]) tamin’ ny taona 2002 dia nandroso tokoa ny fizorana mankany amin’ ny fandriam-pahalemana sy ny fampihavanam-pirenena tamin’ ny volana Desambra 2002, taorian’ ny fifanarahana nosoniavina tany [[Pretoria]] momba ny fitondrana tetezamita ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô. Novitaina tamin’ ny volana Avrily 2003 ny fifanarahana, izay namporisihin’ ny filoham-pirenena [[Thabo Mbeki]]. Taorian’ ny famoahana ny lalàm-panorenana vaovao dia natsangan’ i Joseph Kabila ny governemanta tetezamita tamin’ ny volana Jolay 2003, izay nahitana solontena avy amin’ ny ''Rassemblement congolais pour la démocratie'' (RCD) notarihin’ i Azarias Ruberwa, avy amin’ ny ''Mouvement de libération du Congo'' (MLC) notarihin’ i Jean-Pierre Mbemba, avy amin’ ny mpanohitra tsy mitam-piadiana ary avy amin’ ny fiarahamonim-pirenena.
==== Fitohizan’ ny ady an-trano tany amin’ ny faritra atsinanana ====
==== Toetany ====
Ny Repoblika Demôkrartikan’i Kôngô dia vakivakin’ny fehiben-tany ka noho izany dia ny toetanim-pehibe izay sady mafana no mando manadavan-taona no manjaka ao, nefa misy fahasamihafana kely izany arakaraka ny fehin-tany sy ny haambo (haavo miohatra amin’ny ranomasina). Ny faritra afovoany dia be orana mandavan-taona, manodidina ny 26 °C ny maripana. Ao avaratra sy ao atsimo dia ifandimbiasan’ny fizaran-taonan’ny orana (maharitra valo volana eo ho eo) sy ny fizaran-taona maina (maharitra efa-bolana eo ho eo). Ao amin’ny tangoron-tendrombohitr’itendrombohitr’ i [[Ruwenzori]] ary indraindray ao amin’ireoamin’ ireo afotroa VirongaVirunga dia betsaka ny [[orampanala]] milatsaka satria mivoatra manaraka ny haambo ny zavamaniry sy ny toetany.
==== Zavamaniry ====
Ireo havoanan’i Kivu ao atsinanana, izay tany misolampy tohin’ny tangoron-tendrombohitra an-dranomasin’i Congo-Nily, dia matetika rakotra ahi-maitso ary ny nofon-taniny avy amin’ny afotroa dia lonaka ka mety amin’ny fambolena. Any ambanimbay any dia hitana alam-pehibe midadasika sy mikitroka izay mandrakotra ireo faritra atsinanana sy avaratra atsinanana. Ny ala midadasik’i Ituri dia mivelatra avy any amin’nyamin’ fihaonan’iny fihaonan’ i Congo sy i Aruwimi ao amin’nyamin’ ny farihy Albert sady mandrakotra veleran-tany manakaiky ny 65 000 km². Izany ala izany no faritra farany onenan’ireoonenan’ ireo [[Pigmea]]. Maro ireo karazan-kazo ahazoana fingotra sy ireo palmie fanamboara-menaka izay volen’ny mponina ao amin’ioamin’ io faritra io, hita ao koa ny kafe sy ny hasy (na landihazo), ny akondro ary ny voanio. Rakotry ny fatraa ireo faritra avo indrindra manamorona ny lemak' i Congo.
==== Biby sy vorona ====
Betsaka ny karazam-biby sy vorona. Ao ireo karazam-biby atahorana ho lany tamingana toy ny gorilin-tendrombohitra ao amin’ireo Virunga, ny elefanta, ary koa ireo biby mampinono lehibe toy ny liona, ny leôparda, ny jirafa, ny lalomena, ny ôkapy, ny zebra ary ny bofalô. Ny biby mandady sy mikisaka koa dia hita ao koa, isan’izany ny bibilava pitôna, ny voay. Hita ao koa ny vorona samihafa toy ny boloky, ny sama, ny karazan-takatra. Ny toetany mando dia mampitombo isa ny bibikely, ka isa’izany ny [[moka anôfela]] izay mitondra ny kantsentsitry ny [[tazomoka]], ny [[lalitra tsetse]] miaina eny amin’nyamin’ ny tany lemaka izay mamindra ny aretin’nyaretin’ ny torimaso.
=== Ny mponina sy ny fiarahamonina ===
==== Ny mponina ====
Ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô dia ahitana vondrom-poko fito sy zana-poko mihoatra ny telonjato. Ny vondrona lehibe indrindra dia vondrona banto: ny [[Kôngô (vahoaka)|Kôngô]] (''Kongo''), ny [[Bateke (vahoaka)|Bateke]] (''Bateke''), ny [[Loba (vahoaka)|Loba]] (''Luba''), ny [[Londa (vahoaka)|Londa]] (''Lunda'') ary ny [[Koba (vahoaka)|Koba]] (''Kuba''). Ao avaratra no ahitana ny [[Nilôtika (vahoaka)|Nilôtika]] sy ny [[Pigmea]] (izay monina any amin’nyamin’ ny faritra be).
Ny mponina ao amin’nyamin’ ny Repoblika Demôkratikan’iDemôkratikan’ i Kôngô dia nahatratra any amin’nyamin’ ny 68 008 922 tamin’nytamin’ ny taona 2008, izay manana salan-kakitroka 30 mp/km². Izany isa izany dia manakaiky ny 86 000 000 ankehitriny. Ny toerana tena be mponina dia ao amin’nyamin’ ny faritra fitrandrahana harena an-kinon’nykibon’ ny tany ao Shaba sy ao amin’ny Bas-Congo. Latsaky ny amppahatelon’nyampahatelon’ ny mponina no monina an-tanàn-dehibe. Tamin’nyTamin’ ny taona 2008 dia 42,50 ‰ ny taham-pahaterahana, ary ny taham-pahafatesan’nypahafatesan’ ny zaza dia 64 ‰ ary ny salam-pahela velona dia 57,6 taona.
Tsy ampy ny fandaminana momba ny fitsaboana. Nihanaka izaitsizy ny ny sida. Tamin’nyTamin’ ny volana Avrily 1995 dia nisy valan’aretinvalan’ aretin-tazo mahavery ra vokatry ny [[virosy Ebola]] (avy amin’nyamin’ anaran’nyny anaran’ ny renirao Ebola; izay akainkin’nyakainkin’ ny tanàna nahitana voalohany ilay aretina tamin’nytamin’ ny taona 1976) izay namono olona mihoatra ny 160 tao amin’nyamin’ faritr’iny faritr’ i Kikwit ao atsinanan’iatsinanan’ i Kinshasa.
=== Ny toekarena ===
Na dia manana harena an-kibon’nykibon’ ny tany be dia be aza ny Repoblika Demôkratikan’iDemôkratikan’ i Kôngô izay firenena lehibe indrindra ao [[Afrika Afovoany]], ny PIB dia 10 000 tapitrisa dolara tamin’nytamin’ ny taona 1991 ary nidina 5 700 tapitrisa dolara tamin’nytamin’ ny taona 2003. Taorian’nyTaorian’ ny 25 taona nisian’nynisian’ ny ady an-trano sy ny ampolo taonany maro nisian’nynisian’ ny [[kolikoly]] dia nihatafarina ny Repoblika Demôkratikan’iDemôkratikan’ i Kôngô. Ny 10 %n’nyn’ ny fahafahan’ny toerana misy harena an-kibon’nykibon’ ny tany lehibe ihany mantsy no voatrandraka tamin’nytamin’ ny taona 2003. Ny trosa ivelany dia tafakatra 11 600 tapitrisa dolara tamin’nytamin’ ny taona 2004 ary ny 75 %n’nyn’ ny mponina no miaina amin’nyamin’ ny vola latsaky ny iray eorô isan’androisan’ andro. Ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô dia afaka niditra ao amin’nyamin’ ny programa ''Pays Pauvres Très Endettés'' (PPTE) ka afaka niakatra hatrany ny toekareny tamin’nytamin’ ny taona 2002.
==== Ny loharanon-karena voa-janahary ====
Ahitana [[harena an-kibon’ny tany|harena an-kibon’ ny tany]] be dia be ny ao Maniema sy ao Kivu ary ao Katanga, indrindra ny [[varahina]], ny [[oranioma]], ny [[volamena]] ary ny [[diamondra]].
Ny tobim-pamokarana herin’aratra amin’nyamin’ ny rano izay notokanana tamin’nytamin’ ny taona 1972 ao Inga, ao an’iràn’i Kinshasa ao amin’nyamin’ ny ony Congo no lehibe indrindra maneran-tany, nefa ny ampahnyampahany be amin’nyamin’ ny tanjaky ny tohadranon’itohadranon’ i Inga dia tsy ampiasaina.
Ny hazo sarobidy sy ny hazo fanaovam-panaka sy fanorenana (teka, ebena, sederan’isederan’ i Afrika, ny akazo, sns) dia misy betsaka. Ny alam-pehitany dia mandralotra ny 6 %n’ ny velaran-tany misy ala maneran-tany sy saika ny antsasaky ny velaran-tany misy ala aty [[Afrika]], nefa izay ala izany dia athorana ho ripaky ny tavy. Tamin’nyTamin’ ny taona 2006 dia any amin’nyamin’ ny 75 800 000 m³ ny famokarana hazo, indrindra ny hazo fandrahoana satria sarotra dia sarotra ny fitaterana ny hazo any amin’nyamin’ ny morontsiraka.
==== Ny fambolena ====
Ny fambolena dia sahanin’nysahanin’ ankamaroan’nyny ankamaroan’ ny mponina afaka miasa sady miantoka ny 45,7n’ny7n’ ny PIB tamin’nytamin’ ny taona 2006. Na dia lonaka aza ny lemak’ilemak’ i Congo dia ny 3 %n’nyn’ ny velaran-tany ihany no voavoly. Ny vokatra isan-taona dia ny [[mangahazo]] (voly fihinana lehibe indrindra) sy ny katsaka ary ny voanjo. Ny [[kafe]] no voly fanondrana lehibe indrindra, manaraka ny [[landihazo]] (hasy) sy ny [[kakaô]] ary ny [[dite]]. Ny voly fanondrana dia nihena raha litahamitaha amin’ny voly fihinana taorian’nytaorian’ ny namadihana ho orinasam-pirenena ny orinasa vahiny misahana izany tamin’ireotamin’ ireo taona 1970.
==== Ny fiompiana sy ny jono ====
Tamin’nyTamin’ ny taona 2006 dia miisa 20 000 000 ny [[akoho amam-borona]], 4 020 000 ny [[osy]], 900 000 ny [[ondry]], 757 000 ny [[omby]], ary 960 000 ny [[kisoa]]. Ny fiompiana omby dia hita indrindra ao amin’ireoamin’ ireo tany avo vokatry ny fahamaron’nyfahamaron’ ny laitra[[lalitra tsetse]] eny amin’nyamin’ ny tany lemaka. Ny jono, izay atao an-dranomamy, dia miantoka ny ampahany betsaka amin’nyamin’ ny sakafo.
==== Harena an-kibon’ny tany sy taozava-baventy ====
Ny 15 %n’nyn’ ny mponina afaka miasa dia miasa amin’nyamin’ ny sehatry ny harena an-kibon’nykibon’ ny tany sy ny taozava-baventy, izay miantoka ny 27,7 %n’nyn’ ny PIB tamin’nytamin’ ny taona 2006. Ny harena an-kibon’nykibon’ ny tany indrindra no herena lehibe ao amin’nyamin’ ny Repoblika Demôkratikan’iDemôkratikan’ i Kôngô, izay mihazona ny antsasaky ny tahirin-kôbalta maneran-tany sady isan’ireoisan’ ireo manana tahirim-barahina lehibe indrindra maneran-tany. Ny Repoblika Demôkratikan’iDemôkratikan’ i Kôngô koa taloha no firenena laharana voalohany amin’nyamin’ ny fanondranana kôbalta maneran-tany (6 100 tônina tamin’nytamin’ ny taona 1996), izy koa taloha no laharana faharoa amin’nyamin’ ny famokarana diamondra (20 000 000 karà tamin’nytamin’ ny taona 1991). Ny varahina no vokatra mampidi-bola be indrindra isam-batan’olonaisan’ amin’izyolona amin’ izy ireo. Mitrandraka [[firapotsy]] [[volamena]], [[volafotsy]], fanitso, mangaezy[[manganezy]], [[tongstena]] ary [[kadmioma]] koa ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô. Ny otri-tsolitany an-dranomasina dia trandrahina nanomboka tamin’ny taona 1975. Ny tohodranon’itohodranon’ i Inga eo amin’nyamin’ ny onin’ onin’ii Congo no lehibe indrindra aty [[Afrika]].
Ny taozava-baventy, izay nandroso manodidina ny fitrandrahana akora, indrindra ny varahina, dia tra-pahasahiranana noho ny fitontoganan’nyfitontoganan’ ny toekarena sy noho ny fahasimban’nyfahasimban’ ny fotodrafitrasa vokatry ny ady (lalana, seranan-tsamboptsambo, sns).
==== Ny fifanakalozana anatiny ====
Ny vola Zaira vaovao (''nouveu zaïre'') no vola ampiasaina ao amin’nyamin’ ny Repoblika Demôkratikan’iDemôkratikan’ i Kôngô nanomboka tamin’nytamin’ ny taona 1993. Mitentina 3 000 000 Zaira taloha (''anciens zaïres'') ny iray Zaira vaovao. Taorian’nyTaorian’ nahatingavan’iny nahatingavan’ i [[Laurent-Désiré Kabila]] teo amin’nyamin’ ny fitondrana dia naverina ho farantsa kôngôley (''franc congolais'') izany vola izany. Izany fanoloana izany dia natao mba hisakanana ny fiakaran’nyfiakaran’ ny vidim-piainana izay nihoa-pampana loatra nefa tsy tratra izany tanjona izany. Hatramin’nyHatramin’ ny taona 1995 dia nijanona tsy nihodina intsony ny rafi-pitehirizam-bola, satria ny noraiketin’nynoraiketin’ ny varo-maizina ny sandan’nysandan’ ny vola.
==== Ny fitaterana ====
Ny fahasahiranana nahazo ny raharaham-barotra tao Repoblika Demôkratikan’iDemôkratikan’ i Kôngô dia nohamafisin’nynohamafisin’ fahasimban’nyny fahasimban’ ny lalana. Ny lalam-by izay mitotaly 3 641 km no fitaovam-pitaterana lehibe indrindra anatin’nyanatin’ ny Repoblika Demôkratikan’iDemôkratikan’ i Kôngô, izay mampifandray amin’ireoamin’ ireo seranan-tsambon’itsambon’ i [[Angôla]] ao Benguela, sy amin’nyamin’ ny [[Afrika Atsinanana|faritra atsinanana]] sy atsimon’i[[Faritra Atsimo ao Afrika|atsimon’ i Afrika]]. Ny fahasimban’nyfahasimban’ ny arabe (153 497 km) hatramin’nyhatramin’ ny taona 1990 dia manelingelina ny famatsiana ny tsena maro ny fitaterana ny harena voa-janahary. Ny renirano sy ny ony azo ifamoivoizana amin’nyamin’ ny sambo, izay mirefy 17 285 km, no tena ampisaina, ka ny ony Congo dia azo ifamoivoizana amin’nyamin’ ny ampahany avy any amin’nyamin’ ny vinany fivarinany any an-dranomasina ka hatrany amin’nyamin’ tanànan’iny tanànan’ i Matadi ary any an’avàn’nyan’avàn’ tanànan’iny tanànan’ i [[Kinshasa]]. Misy seranam-piaramanidina iraisam-pirenena dimy ny Repoblika Demôkratikan’iDemôkratikan’ i Kôngô.
Miankina indrindra amin’ny fitaterana ana habakabaka sy amin’ny sora-davirta (telegrafia) ny fifandraisana.
==== Varotra ivelany ====
Ny varotra ivelany tao Zaira taloha dia tsy mifandanja satria ny fanafarana entana no be. Nifamadika izany tamin’nytamin’ ny taona 1991. Ny varahina dia misahana ny antsasaky ny vola miditra amin’nyamin’ ny fanondranana entana. I [[Belzika]], i Etazoia[[Etazonia]], i [[Alemaina]] ary i [[Frantsa]] no mpiara-miombona antoka momba ny varotra ivelany amin’nyamin’ ny Repoblika Demôkratikan’iDemôkratikan’ i Kôngô.
== Ny kolontsaina ==
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/998463"